ARI IYO WEER, iyo RAALI GELINTA DADKA.
Waxaa maanta halkaan idinkugu soo bandhigeynaa buug sheekooyin ah oo uu qorey qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo C/qaadir Nuur Xuseen Maax waxaan idinkaga bilaabeynaa qeybtii 1-aad Buugii Sheekooyinka
Sheekadii 2. ARI IYO WEER
Beri baa waxaa wada sacdaaley labo nin oo saaxiibo , intay jidka ku sii jireen ayey iska sii sheekeysteen, waxayna isaga kaftameen hebelow haddii hadda lagu oran lahaa ilaahey waxaad ka baridaa wax, kaas oo lagu siinayo, maxaad ka baryi lahayd? wuxuu yiri waxaan ka baryi lahaa ari badan in ilaahey I siiyo e, adigu maxaad ilaahey ka baryi lahayd? Wuxuu yidhi aniguna waxaan ilaahey ka baryi lahaa yeey badan oo arigaaga cunta in ilaahey I siiyo.
Saaxiibkii ariga baryey oo carro darted wejigu guduutay, bal cadow inaad ii tahay maxaad yey arigeyga cunta ilaahey uga bariday, ma dhibkeyga ayaad jeceshahay?
Maya dhibkaaga ma jecliye,hadfad adigu saaxiib k3eeytahay maxaad ariga kaligaa ilaaheey ugabariday ,oohadaanilaaheey kaligeey arikabaryay maad xoolaha noocyadoodakala kabaridid in ta aad dugaag ka baryeyso, waan ku arkay oo adigu saaxiib fiican ma ahid,
Labdii nin iyagoo qir iyo qir arintu ay ka tahay ayaa waxaa soo ag maray nin faras saran oo labo ubbo oo subag ahna wata, intay joojiyeen ayey ka codsadeen inuu u garsooro, markii uu ka ogolaaday ayey dacwadoodii u sheegteen iyo wixii ay isku haysteenba , ninkii garsooraha ahaa markuu aad u dhegeystay ayaa intuu madaxa ruxay oo labadiisii ubbo oo subaga ahaa afka ka furey oo foorariyey ayuu yidhi dhiigeyga sida subagaas alaha u daadiyee wax labadiinan idinka doqonsan ma arkin. Waryaada ma. Waxaad isku dagaaleysaan wax aydin haynin. Labadii nine ee ishaystay intay is ewegeen oo qosleen ayey iska dhaqaaqiin iyagoo la yaaban nacasnimada nin ay garta u dhigteen…
Sheekadiina halkaa ayey ku dhamaatay..
Sheekadii 3. RAALI GELINTA DADKA.
Beri baa waxaa dameer wada raacay wiil iyo aabihii, waxayna ka safreen Magaalo, waxayna u socdeen magaalo kale, markii ay magaaladii ka baxeen ayuu odaygii wuxuu dameerkii saaray wiilkii isaguna wuu hogaaminayey. Markii ay cabbaar socdeen ayey waxay soo mareen dad meel tuban. Dadkiibaa yaab muujiyey. Waxayna yiraahdeen waa aakhiro sabaan, 'Odaygii waayeelka ahaa baa lugaynaya, wiilkii yaraana Dameer buu saran yahay' Bal muu odaygu fuulo oo wiilku hogaamiyo!!
Odaygii wuxuu maqlay hadalkii dadka, markay dhaafeen ayuu wiilkii ka dejiyey Dameerkii, oo isagii baa fuulay, markay hal cabbaar ah socdeen ayaa waxay soo mareen dadk kale oo meel tagtaagay dadkiibaa misana amakaag muujiyey oo waxay yiraahdeen Odaygaan cimrigiisa soo qaatay dameer buu saaran yahay. Wiilkii yaraana wuu lugaysiinayaa, bal may labadooduba wada fuulaan hadduusan wiilkaba saareyn.
Odaygii hadana hadalkii buu maqlay, markay xoogaa socdeen ayuu wiilkii ku yiri; 'ila soo fuul dameerka oo iso fangal, halkii ayey socodkoodii ka sii wateen Markay in cabbaar ah socdeen oo ay magaaladii u sii dhowyihiin, ayey waxay soo mareen misana dad kale oo rag iyo dumarba leh oo meel tuuran, intay qosol iyo yax-yax muujiyeen ayey yiraahdeen Miskiin Dameerka waxay ku fuushan yihiin laba qofood, so ma oga in xayawaanku cuquubo leeyahay, waxaa uga sidaan uga kheyr badnaan laheyd inay isagaba markiisa nasiyaan oo ay qaadaan!!
Odaygii hadana hadalkaas buu maqlay markay wax yar socdeen ayey intay labadoodiiba Dameerkii ka degeen oo afarta lugood ka xireen oo ul dhexda ka geliyeen ayey walwaaleen oo ay qaadeen iyagoo sidii u sida ayey soo gaareen Buundadii Magaalada laga galaayey, dadkii ayaa yar iyo weynba ka daba yaaceen, kuna oriyeen oo ku yiraahdeen war waamaxay labada doqon ee dameerka sida.
Buuqii sawaxankii iyo qayladii dadka ayuu dameerkii ka sasay markaasuu iska haraatiyey oo ka fakaday xarigii islamarkaana buunadii ka dhacay oo webigii bartanka u galay odaygii iyo wiilkiisii oo xarko maran sida ayaa mgaaladii galay, waxaana odaygii laga hayaa 'qofkii dadkoo dhan raalli geli isyiraa wax la'aan baa u dambaysa'